"Billabong" indlu yangaphambili yolwandle kufutshane neSt. Andrews
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguChris
Ikhaya le-cottage libekwe kwindawo ethule kakhulu kwaye yabucala kwihlathi ngaselwandle. Ukuhlala kwidesika ngasemanzini ujonge ngaphaya kwe-boom cove ukuya eLong kunye neSiqithi seNyoni awuyi kufumana nto kwindawo eyenziwe ngumntu. Amaxhalanga anesibindi, i-osprey, inkosi yokuloba kunye neeloon zinokubonwa ziloba. Amava amaza amakhulu e-Bay of Fundy ngexesha lokuhamba elunxwemeni, i-kayaking okanye i-canoeing (ekhoyo). Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye uphefumle umoya omtsha xa ubaleka isixeko esikhulu.
"Billabong", igumbi lokulala eli-2 / igumbi lokuhlambela eli-2 ekhaya, lilala abantu aba-2 ukuya kwaba-4. Indawo ezolileyo kunye ne-idyllic enemibono engonakaliswanga kwiziqithi ezingachukunyiswanga kwindawo yangasese enamanzi azolileyo. Ifanelekile kwi-kayaking okanye i-canoeing okanye ukumamela nje izandi zendalo kwidekhi yelanga okanye idokhi kumda wamanzi. Jonga iiloon, amadada, amaxhalanga kunye neeosprey. Imizuzu eyi-15 yokuqhuba ukuya eSt Andrews, eSt Stephen okanye eSt.
I-cottage inokukhanya okusemazantsi kunye nelanga elininzi imini yonke. Ijikelezwe yi-birch emhlophe kunye nephuzi, eminye imithi yefir kunye nemibono engabonakaliyo kwi-cove, "iBillabong" inika ubuchwephesha be-eclectic kwimigangatho emibini kunye negumbi lokuzilolonga kwigumbi elingaphantsi lokuhamba.
Izibonelelo ziquka ingqiqo yokuhamba evulekileyo kuwo wonke umgangatho ophambili kunye nomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi, imigangatho yomthi oqinileyo kunye nemiqadi eveziweyo
-Ikhitshi / igumbi lokutyela elixhotyiswe ngokupheleleyo
- Igumbi lokuhlala elahlukileyo
- Indawo yokuhlala ye-T.V. / i-satellite t.v., isitiriyo, iDVD, iNetflix
-Igumbi lokulala elibalaseleyo elinebhedi yokumkanikazi ejonge ibhayi
- igumbi lokulala lesibini elineebhedi ezimbini ezingatshatanga kunye nombono wehlathi
- 2 amagumbi okuhlambela agcweleyo
- Hamba uphume kwigumbi elingaphantsi elinezixhobo zokuzilolonga kunye nendawo yokuhlala
-I-BBQ kwindawo enkulu
- Isihlambi zitya
- Iwasha / isomisi
- Zonke iilinen kunye neetawuli
- Umosi wenwele
- Ukupaka iimoto ezimbini
-Ukusetyenziswa kwekayak kunye nephenyane
-Ukufikelela kwi-Intanethi mahala
Indlwana yaseBillabong ibekwe kwindawo ethe cwaka yabucala ePassamaquoddy bay (Bay of Fundy) imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kwimbali yaseSt.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint Andrews